Ma ihi qof raacsan siyaasiyiin ku sheega ku khamaaraya dhiiga umada Puntland!!!!
Posted to the Web 00:35 GMT December 25, 2001
To: Dhamaan dadka wax garadka ah
From: Caqli saafi ah
Date: 25.12. 2001
Waxaan halkaan jeclaan lahaa inaan figradayda ka dhiibto dadkana u gudbiyo, aan walaalaha nahay.Walaalayaal hadaan nahay reer Puntland waa inaan ufakirnaa sidii aan uga shaqayn lahayn islaaxa dhexdeena ah una adkayn lahayn walaalnimada dhaladka ah iyo magaca naga dhexeeya,walaalayaal marka hore waxaa isway diin leh hadii aan dad walaala ah nahay maxaa muqadasa inaan ilaalino si,ay ubadbaado walaalnimada dhabta ah ee naga dhaxaysa.
Marka labaadna waa inaan ka hormarinaa wax walba taasi siday u jirilahayd,ayadoo lagu ilaalinayio horta inay cadahay ujeedada aanu udhisanay puntland.
Dhismihii Puntland dadka looyaqaan siyaasiyiintu ujoodooyikoodu waa inay dansiyaasadeed iyo kursi ku gaaraan maamulka jira halka danta shacabku ay tahay inay ku gaaraan kaladanbayn isjacayl amaan iyo walaalnimo adag iyo mowqif mid ah marka cadawga banaanka iyo kan gudha labadaba lawaajahayo.
Runtii waxay umuuqataa cadawgii guduhu inuu laxirtay cadawgii dibada shacabkana ay isaga dhigayaan kuwo wada dantoota xaqiiqaduna way kafogtahay Arintaas.
Xaqiiqadu waxaa weeye in runta loo soo laabto , sababtoo ah waxaa cad inay dadbadan oo soomaaliya dhibayso horumarka iyo aminiga kajira gayiga puntland iyo ayadoo uu kuyaraa waxa loo yaqaano qabqablayaasha dagaalka ama dagaal oogayaashu.
Runtii waxaa wax laga naxo ah in dad udhashay gobalka oo nabad lagu aqoon jiray iyo islaax ay hada u xuubsiibanayaan dagaal oogayaal iyo fidna wadayaal kuwaasoo qaarkood ay caan ahaayeen marka laga eego xalinta khilaafaadka umada dhexdeeda ahaan jiray. Ugu danbayntii walaalayaal waa in cadawga lagafoojignaadaa gudaha iyo dibadaba lana ilaaliyaa midnimada umada dagaalkana laga doortaa islaaxa waayo islaaxa waxaa kujira khayr dagaalkana shar iyo burbur iyo caro ilaahey.
Mida kale oo aad loogu baahan yahay waxaa kamid ah inlaga taxadaro daadinta dhiiga muslimiinta waayo culumada qaar waxay kutageen oo asxaabtii ugu horayso inaan laga tawbad aqbalayn muslim muslim dilay,waxaa kaloo cad in hadii laba muslim ay isdagaalan kan wax dilay iyo kan ladilay ay ahlu naar yihiin ilaahay hanaga badbaadiyee,
Walaalayaal carta waa in laga taxadaraa waayo waa dagaal oogayaal hore iyo kuwo danbe anigana shaki iigama jiro inay yihiin kuwii horey umada isugu diray xiligii siyaad bare hadana wada,
Soomaalina heshiin mayso ilaa inta laxaqirayo dadka wanaagsan ee wanaag ka taliska ah.
xamaasada iyo sufahanimada iyo qabiilku wanaaga yay kasoo horjeedaan , hadii ay Soomaalina heshiinayso waa wax wanaagsan laa kiin ayadoo dulmi jiro heshiis imaanmayo dhibtuna intaa way kabadanaysaa.
Puntland iyo Soomaaliya hanoolaadeen.